Muuri News Network » SAWIRO:Magafihii Liibiya ee dhibaateyn jiray Somalida oo la dilay..
SAWIRO:Magafihii Liibiya ee dhibaateyn jiray Somalida oo la dilay..
Qoraal kusoo baxay Warsidaha Theguardian, ayaa lagu xaqiijiyay in weerar qorsheysnaa lagu Kharijiyay Hogaamiyaha shabakadaha Tahriibka Libya Salah al-Maskhout oo ay soomaalida u taqaan “Ma gafe” iyo Xubno kala shaqeynaayay Tahriibinta.
Hogaamiyaha Mukhalasiinta Tahriibka ayaa la qaxiijiyay in lagu dilay Howlgal qorsheysnaa oo maalinimadii Jimcihii ka dhacay inta u dhexeysa Saxaraha iyo Xuduudka Libya xili uu Magafe ku howlanaa baaritaanka wadooyin cusub oo ay maalmihii danbe adeegsanayeen Muhaajiriinta Africaanka ee u socdaala dalalka Yurub.
Xiliga la dilaayay Magafe ayaa waxaa wehlinaayay 8 xubnood oo isaga kala shaqeyn jiray Tahriibka kuwaasi oo iyaguna qoraalka lagu xaqiijiyay inay la dhinteen Hogaamiyaha shabakadaha Tahriibka.
Wararka ugu badan ee iminka taagan ayaa sheegaya in Howlgalka lagu dilay Magafe iyo Xubnihii la socday ay fuliyeen Ciidamo ajaanib ah oo aan la faramuuqin ilaa iyo hadda waxa ay yihiin.
Saraakiisha Ciidamada Badda Talyaaniga ayaa sheegay in Al-Maskhout uu howlgalkan ku dhintay balse dad qaraabadiisa ah waxa ay sheegeen in uu ka bad-baaday weerarkaasi qorsheysnaa.
Salah al-Maskhout oo ay Soomaalidu u taqaan ‘’Magafe’’ ayaa saaxada Tahriibka kusoo biiray tan iyo markii Somalia ay soo galeen Ciidamada Ethiopia oo ay sii korortay Tahriibka Soomaalida.
Warbixintaani uu daabacay Wargeyska Theguardian, ayaa kusoo beegmeysa xili laba bil ka hor dowladaha Midowga Yurub ay soo saaren warbixin ah inay beegsan doonaan Hogaamiyayaasha Tahriibka ee sababta u ah qulqulka Muhaajiriinta Africa.